Syria: Aleppo oo inteeda badan gacanta u gashey ciidamada Bashar al-Assad – idalenews.com
Syria: Aleppo oo inteeda badan gacanta u gashey ciidamada Bashar al-Assad
Allepo(INO)- Ciidada Siiriya oo ay taagerayaa ciidamo kale oo ka socda dalalka Lubnaan iyo Iran ayaa habeenkii xalay ilaa waaberkii Arbacada dagaal culus ku hayey Bariga magaalada gaar ahaan halka loo yaqaan Magaalada Qadiimiga ah, waxaana dhanka cirka ka taageerayey diyaaradaha Ruushka.
Sida ay ku waramayaan hay’adaha xuquuqda aadanaha ee la socda arrimaha Siiriya gaar ahaan The Syrian Observatory for Human Rights, Xoogaga Jamhadaha ayaa intoodi ugu danbeysey ku urureen qayb yar oo kamid ah magalaada qadiimiga ah, waxaana dhan kasta uga wareegsan ciidamada Xukuumadda.
Mucaaradka hubeysan ayaa hadda ku dhawaaqey shan maalmood oo xabbad joojin ah in la siiyo iyo in loo baneeyo dariiq ay ka baxaan, waxaa la aaminsan yahay in ay Old City ku xaniban yihiin dad gaaraya 200 000 oo qof oo ay ku jiraan Malayshiyaadka mucaaradku.
Magaalada Xalab oo ahayd magaalada ugu weyn dalka Siiriya ayaa muddo shan sano ah ay dagaalo ka socdeen, waxaana qaybta ay Mucaaradku ka baxeen maanta oo Arbaca ay gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii 2012.
Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Ruushaka iyo Maraykanka ayaa gelinka danbe ee Arbacada kulan ku yeelanayey magaalada Humburg ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan xaaladda soo korortey.
Dhageyso:Faah faahin Dagaal ka dhacay Goof-gaduud Ee Gobolka Bay